पुरुषको ‘वीर्य’ खाँदा महिलालाई कस्तो असर गर्छ ? Darpansansar News
काठमाडौं । तपाईंलाई थाहा छ ? कतिपय व्यक्तिले पुरुषको वीर्य खाने गर्छन् । विशेष गरी यौन क्रियाकलापका संलग्न महिलाहरुले बीर्य सेवन गर्ने गर्छन ।
वीर्य किन खाइन्छ त ? सामान्यतः प्रकृतिले यसलाई योनिमा राख्नका लागी उत्पन्न गरेको हुन्छ । त्यसैले यो त्यति मीठो वा स्वादिलो हुँदैन । धेरैजसो व्यक्तिलाई यसको स्वाद वा गन्ध मन नपर्न सक्छ । केही व्यक्तिलाई यस किसिमको यौन क्रियाकलापले यौन आनन्द प्राप्त गर्ने सहयोगी भूमिका खेलेको हुनाले खाएर आनन्द लिन्छन् ।
कतिपय कुराको सन्दर्भमा सुरुमा यसको स्वाद मन नपरे पनि पछि अभ्यस्त हुने र आफू र आफ्नो यौनसाथीलाई रोचक तथा आनन्ददायक लाग्ने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिने गरेको पाइन्छ ।
योनिमा पर्दा यसको सकारात्मक असर हुने भए पनि खाँदा पनि त्यति नै प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा एकमत भने छैन । एक स्वस्थ व्यक्तिको वीर्य खाँदा अर्थात् वीर्यपान गर्दा कुनै हानि हुँदैन । वीर्यमा कुनै विषालु पदार्थ हुँदैन ।
रसायनिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यसमा केही सामान्य कार्बोहाईड्रेड, केही प्रोटिनका साथमा मुख्यतयाः पानी हुन्छ । यसमा भएको पदार्थ एक विशेष मानवकोष ‘शुक्रकीट’ बाँच्न सकोस् भनेर संरचना गरिएको हुन्छ, त्यसैले मानवकोषलाई हानि गर्ने किसिमको कुनै पदार्थ यसमा हुँदैन ।
वीर्य निलिएपछि आमाशय (पेट) मा पुग्छ र त्यहाँको पाचनरस (एसिड) मा शुक्रकीटहरू मर्छन् अनि अन्य पदार्थका साथै त्यसलाई पनि मानिसले पचाउँछ । कसैकसैलाई वीर्य मुखमा परेको मन नपर्न सक्छ । कसैलाई यसको स्वाद वा गन्ध मन पर्दैन । त्यसो हुँदा वाकवाक लाग्ने हुन सक्छ ।
एचआईभी तथा यौन रोग सर्ने सन्दर्भमा वीर्यपान खतरा पनि हुन सक्छ । यौनरोग छ भने लिङ्ग योनि मैथुनमा जस्तै शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थको सम्पर्कमा आउँदा रोगसमेत सर्ने सम्भावना हुन्छ ।
वीर्यमा प्रजनन क्षमताका लागि आवश्यक शुक्रकीट भएकाले यसको उत्पादनलाई पोषणयुक्त खानेकुरा आवश्यक पर्छ । पोषणका दृष्टिले एक सामान्य व्यक्तिलाई १८ सयदेखि २२ सय क्यालोरी शक्ति चाहिन्छ र एकपल्टको वीर्य स्खलनमा यस्तै १५ क्यालोरीजति हुन्छ ।
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी १६ औंं आमरण अनशन बस्ने तयारीका लागी इलाम पुगेका छन् । । उनले पौष २५ ...
काठमाडौं । नेपाली बजारमा १ हजार ३ सय प्रकृतिका औषधि बिक्री भइरहेका छन् । तर, तीमध्ये बढी ...
महिलाहरूले यौन आनन्द कुन समय लिन्छन् ?
काठमाडौं । महिलाहरूलाई यौनको आवश्यकताबारे विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन् । एक अध्ययनका अनुसार, ...
अवाञ्छित चलखेल भएमा कुनैपनि बेला अनशन सुरुः डा.केसी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले बुधबारदेखि सुरु ...
भयावह बन्दै असुरक्षित गर्भपतन
काठमाडौं । गर्भपतन गराउने सयजनामध्ये ५८ महिलाले असुरक्षित ढंगबाट गर्भपतन गराउने गरेको ...
बीसीजी खोप लगाउँदा एक महिने शिशुको मृत्यु भएपछि नाराजुलुश
काठमाडौं । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–३ शिवगञ्ज टोलमा बीसीजी खोप लगाउँदा एक महिने ...
प्रसूति भत्ता नै उधारो
हुम्ला । जिल्लाकै मध्यक्षेत्रको सर्केगाड गाउँपालिकाबाट केन्द्रबाट प्राप्त हुने � ...
काठमाडौं । बंगलादेशमा कालो सूचीमा परेका ३७ मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेका ६ सयभन्दा बढी ...
काठमाडौं । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकामा एक १२ वर्षीया बालिका गर्भवती भएको पाइएको छ । ११ ...